नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक [Nepal] - 24 Mar, 2019
पाठक मञ्च Page 6
आर्थिक सहायतामा लूट
स्मरण Page 7
परिहास Page 10
न रेड कार्पेट, न रेड कर्नर
नाच्ने हो कि नचाउने हो ?
परिहास Page 11
एटीसीको कान परीक्षण
हाम्रो नेपालमा Page 12
सिनेमा Page 50
पुस्तक Page 54
तीन किताब Page 55
नोटबुक Page 58
निमुखालाई भैपरी अप्ठेरो पर्दा उपलब्ध गराउनुपर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतामा पनि पार्टीका आसेपासेको रजाइँ हुनु लज्जाको विषय हो (गरिबको बोल्दिने कोई छैन, १० चैत) । गृह मन्त्रालयले वितरण गर्ने सहायता पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टी निकटका व्यक्तिले झ्वाम पार्दा रहेछन् । रोकाह परिवारको कहानी सुन्दा लाग्छ, नेपालमा जुनै सरकार आए पनि भुइँतहका नागरिक जहिल्यै पीडामा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।
एक वर्ष अवधिमै राज्यकोषबाट दलका कार्यकर्ताले करोडौँ रकम विभिन्न शीर्षकमा कुम्लाएछन् । गरिबका निवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर सरकारले पार्टी निकटका धनी कार्यकर्तालाई मनलाग्दी रकम वितरण गरेर गरिबका निम्ति नबोलिदिँदा मन कुँडियो ।
– स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले वितरण गर्ने आर्थिक सहायताको रकम गरिबभन्दा हुनेखाने वर्गका लागि रहेछ भन्ने देखियो । गरिबका लागि छुट्याइए पनि सिंहदरबार छिचोल्न नसक्ने आवाजविहीनले त्यस्तो सहायता पाउन हम्मे पर्छ नै । दलका कार्यकर्ता पोस्न यसले सक्दो सहयोग गरेजस्तो लाग्यो ।
सर्वहारा वर्गको नेतृत्व मार्क्सवादीले मात्र गर्छन् भनिए पनि स्टालिनको मृत्युपछि उनकै चेलाले गद्दार घोषित गर्नु राजनीतिमा गुट स्वार्थ हाबी हुनुको परिणाम हो (‘मरेपछि गद्दार स्टालिन’, २६ फागुन) । जसरी नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि जीवन समर्पित गरेका गणेशमान सिंहलाई गुट चलाउने पार्टी नेताहरुले कम महफ्व दिन्छन्, उसैगरी स्टालिनका उत्तराधिकारी ख्रुस्चेवले गद्दार घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्यलगायतका शीर्ष नेताको भूमिका अतुलनीय छ । राजनीतिक आस्था र विचार फरक भए पनि प्रजातन्त्र ल्याउन उनीहरुले कांग्रेससँग गरेको समझदारी उचित छ ।
नवदर्शन मावि, लिखुतामाकोसी–७ रामेछाप
Surya Raj Acharya @SuryaRAcharya
पूर्वाधार विकासमा आधारहीन पद्धति र बेहालको कार्यान्वयनबारे योगेश ढकालको विश्लेषण/रिपोर्ट गज्जब लाग्यो ।
Hari krishna shakya @Harikrishnashky
माथेमाको लेख सान्दर्भिक छ । जुन विद्यार्थी आफ्नो देशको इतिहास पढ्दैन, आफ्नो पुर्खाको गाथा गाउँदैन, त्यस देशको भविष्य पनि छैन । विज्ञान ज्ञान हो भने वाणिज्यशास्त्र व्यवस्थापन मात्र हो, मानविकी बुद्धि र विवेक हो । विवेकबिनाको मानिस पशुभन्दा पनि नीच हुन्छ ।
Ganess Paudel @ganesspaudel
भर्खरै अर्चना थापाको अनुभूति मायाको चिनो नेपाल म्यागजिनमा पढेँ । आज दिउँसो मिटिङ छ, कठोर भएर निर्णय गर्नुपर्ने । तर अब मैले कुनै निर्णय गरुँलाजस्तो छैन । सोच्दैछु, मिटिङ सारुँ कि भावुक निर्णय गरेर घाटामा जाऊँ !
Binod Neupane @binu3
मुर्छा पार्छन्, पण्डितजी ! ‘सविता दंगालको नागरिकता भोजपुरको छ । विवाहपछि घरबार भक्तपुर छ । उनले भक्तपुरकै नगरपालिकामा समायोजन रोजेकी थिइन् । तर समायोजन भयो, कर्णाली प्रदेशको डोल्पास्थित त्रिपुराकोट नगरपालिकामा ।’
Manisha Rana @ManishaMahat2
नर्वेली एक सांसदले भनेका छन्, ’हामीले ग्रेटालाई मनोनीत यसकारण गरेका हौँ कि जलवायुको चुनौती युद्ध र संघर्षको प्रमुख कारणसमेत बन्न सक्छ ।’ रोमाञ्चक खबर Û
S.K. Adhikari Gopi
मैले देखे/बुझेको कुरा कोही मानिस बिरामी भयो । मानौँ, पोखराको कुनै एक अस्पताल गयो । त्यहाँ जचाउँछन् । कुनै रोग देखियो, त्यहाँ पूरा उपचार हुँदैन । त्यो चिकित्सकलाई थाहा छ । फेरि पनि सीधै अन्यत्र रेफर गर्दैन । त्यही राखेर दबाइ, पानी गर्छ । बिरामीको धन खलास भएपछि अन्त्यमा ‘ल यहाँ भएन, काठमाडौँ जानूस् भनिन्छ । किन यस्तो चलन छ, नेपालमा । यस्तो लुट्ने खेल कहिले बन्द हुन्छ ?
बहकिएका सत्तापक्ष, प्रतिफक्ष र अगुवा
आफ्नो कोटरीभित्रको नाफाघाटा मात्र हेरेर बोल्ने, विषयको गहिराइ नबुझी बोल्ने र हावाको वेग हेरी बोल्ने नेतागण धेरै भएको मुलुक रहेछ हाम्रो । यस्तै समय परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई नबुझी झोँक चलाउने कार्यकर्ताको कुरै नगरौँ । कमसेकम प्रेसले सत्यतथ्य देखाउनुपर्ने हो ।
तुरुन्त वैदेशिक ऋण बन्द गर्नुपर्छ । अब समीक्षा गर्ने बेला भयो । हावामा ऋण लिने र भ्रष्ट मोटाउने मात्र भयो ।
लब वृद्धिको एकसूत्रीय मागसहित नेपालमा पहिलो पटक सरकारी अड्डाखानामा निजामती कर्मचारीले हड्ताल गरे, १९ जेठ ००९ देखि । उबेला कांग्रेस/कम्युनिस्ट समर्थक कर्मचारी संगठन क्रियाशील थिएनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालका बा भक्तलाल श्रेष्ठ खरदारसरहका सरकारी जागिरे थिए । भक्तलाल घरेलु अफिसमा काम गर्थे ।
अचम्म के भने उबेला राणा हटिसके पनि सरकारी पुलिसमा समायोजन भएका मुक्ति सेनाका कमान्डरले दाजुलाई भाषण गर्दार् पक्राउ गरे । कर्मचारी आन्दोलन शिथिल भएसँगै दाजु पनि छुटे । खुला रुपमा राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि दाजु नेपालको सबैभन्दा पुराना सुन्धारा पाटन लुकुसे टोलको एक घरमा तीन वर्षसम्म भूमिगत रहे । त्यहीँ बसेर उनले कम्युनिस्ट गतिविधि अगाडि बढाए ।
अमेरिकी मामिलामा नेपालका कम्युनिस्टहरुको समस्या उस्तै छ । अमेरिका भनेपछि उनीहरुको एक नम्बरकै प्रधान शत्रु हुन्छ । अनि घुम्न निस्कनुपर्‍यो अथवा पढाइका लागि जानुपर्‍यो वा उपचारका लागि लानुपर्‍यो भने पनि एक नम्बरमै पर्न आउँछ अमेरिका । वास्तवमा कम्युनिस्टहरुको मनमस्तिष्कमा अमेरिका कति जब्बरसँग घुसेको हुन्छ भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ । गाली गर्नुपरे पनि अमेरिकै एक नम्बर, ताली बजाउनुपरे पनि अमेरिकै एक नम्बर । अमेरिकाबाहेक अरु त छँदै छैन ।
अरुको के कुरा, जिन्दगीभर अमेरिकालाई गाली गरेर राजनीति गरेका देशकै शीर्षस्थ कम्युनिस्ट नेता कमरेड प्रचण्डको समेत त्यही हालत भयो । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, विस्तारवादी, तानाशाही, कागजको बाघ के–के भन्दै राजनीति अघि बढाए । खुला राजनीतिमा आएपछि श्रीमती जँचाउन फेरि त्यही अमेरिका जानुपर्ने भयो । भेनेजुएलामा त्यस्तो उपचार नपाइने रहेछ । त्यसैले पनि अमेरिकाबाहेक अर्को विकल्प रहेन ।
उनी अमेरिका त पुगे । तर कहीँ पनि रेड कार्पेट भने देखिएन । रेड कार्पेट नदेखिएको बारे केहीको टिप्पणी यस्तो पनि रह्यो, ‘रेड कार्पेट नदेखिएकामा दुःख नमनाउनुस्, बरु रेड कर्नर नभएकामा खुसी मनाउनुस् ।’ प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणमा ‘रेड’ कहीँ पनि देखिएन । न रेड कार्पेट, न रेड कर्नर । बरु ‘रेड’ को ठाउँमा झन्डै–झन्डै ‘ब्ल्याक’ पो देखिन लाग्या थियो कि ?
केही अघिको घटना हो । नेपालका लागि चिनियाा राजदूत होउ यान्छी एउटा नेपाली गीतमा नाचिन् । नेपाली गीतमा चिनियाँ राजदूत नाचेपछि को पो खुसी नहोला र ? त्यसो त नेपाली गीतमा नाच्ने नर्तकीहरु अरु पनि धेरै छन् । तर राजदूत भनेपछि उनको कूटनीतिक मर्यादा हुन्छ । त्यसैले उनको नाचमा पनि कूटनीतिक अर्थ लुकेको हुनुपर्छ ।
नेपालमा राजदूतहरु चीनका मात्र हैन, अरु धेरै देशका छन् । जस्तो, भारत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, श्रीलंका, बेलायत, युरोपियन युनियन आदि । यीमध्ये केही राजदूत यस्ता पनि छन्, जो आफ्नो देशको गीतमा नेपाललाई नचाइरहेका हुन्छन् । नेपाललाई कुन गीतमा नचाउने भनेर उनीहरुले आफ्नो देशबाट गीतसमेत लिएर आएका हुन्छन् । अनि मौका मिल्नासाथ नेपाललाई त्यही गीतमा नचाउन थाल्छन् । कहिलेकाहीँ त कस्तो भइदिन्छ भने एउटा राजदूतले आफ्नो गीतमा नचाएर गीत सकिएको पनि हुँदैन, अर्को राजदूतले आफ्नो गीत बजाइसकेको हुन्छ । नेपाल तत्काल फेरि त्यो गीतमा पनि नाच्छ थालिहाल्छ । ती राजदूत महोदयहरु यहाँ बसुन्जेल नेपाललाई त्यसरी नै दिनरात नचाएर मनोरन्जन लिइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा एउटी विदेशी राजदूत आफ्नो गीत छाडेर नेपालको गीतमा आफैँ नाच्न आइपुग्नु कम खुसीको कुरा हो ? राजदूत महामहिमले नाचेर दिएको यो कूटनीतिक सन्देशलाई अरु राजदूत महोदयहरुले कसरी लिएका छन् कुन्नि !
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चन्द्रगढीबाट काठमाडौँ आउँदा विमानले ६ मिनेटसम्म आकाशमै होल्ड गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनाइएको समितिले काठमाडौँ विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) को कान जाँच्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरेछ । एटीसीको कारणले नभई उनका कानका कारणले भीभीआईपी सवार जहाजलाई त्यसरी आकाशमा होल्ड गरिएको पत्ता लागेछ । विगतका छानबिन समितिले यसरी कुनै ठोस कारण र निराकरणका यस्ता अचूक उपाय पत्ता लगाउँदैनथे । यस्तो स्पष्ट र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने रिपोर्ट आजसम्म कुनै यस्ता छानबिन समितिले दिन सकेका थिएनन् ।
खास कुरा के भएछ भने ती एटीसीलाई प्रधानमन्त्री चढेको जहाजका पाइलटले ‘भीभीआईपीको सवारी छ’ भनेकोलाई एटीसीको कानले एउटा मात्र ‘भी’ सुनेकाले उनले केही बेर आकाशमै जहाज घुमाइदिएछन् । एटीसीको कानको कारणले मिनेट–मिनेट समयको ख्याल गर्ने र सेकेन्ड–सेकेन्ड समयको पालना गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको ६ मिनेट समय नष्ट भएछ । एटीसीको त्यो कानले यसैगरी धोका दिँदै गयो भने कुनै बेला ठूलै दुर्घटना पनि हुन सक्ने देखियो । यस्ता सार्वजनिक पदमा बस्ने मानिसका शरीरका अंग र तिनीहरुको स्वास्थ्य कति महफ्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यस रिपोर्टले थाहा दियो । व्यक्तिले गल्ती नगर्दा नगर्दै उसको कुनै अंगको गल्तीले काम–कुरा बिग्रन सक्दो रहेछ । त्यसैले एटीसीका कानजस्तै सार्वजनिक पदमा बसेका हरेक व्यक्तिका कार्यप्रकृतिअनुसार जिब्रो, आँखा, नाक, घाँटी, फोक्सो, कलेजो मात्र होइन, बेलाबेला तिनीहरुको मस्तिष्क पनि जँचाउनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान यो रिपोर्टले दिएको छ ।
यो रिपोर्टको अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, हाम्रा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुका कान र जिब्रो जँचाउनचाहिँ धेरै ढिला भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीज्यू आफ्ना गुटका मान्छेले सात डाँडापारिबाट बोलेको पनि सुन्छन्, तर आफ्नो गुट बाहिरकाले कानैमा आएर कराउँदा पनि सुन्दैनन् भनिन्छ, किन ? उनी नबोले राम्रो हुने कुरामा पनि प्याच्चपुच्च बोलेर विवादमा आइरहन्छन्, किन ? हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाजी पत्रकारले सोधेभन्दा नसोधेका प्रश्नको उत्तर दिन्छन्, किन ? उनी नेता/कार्यकर्ता वा पत्रकारसँग किन झर्किन्छन्, किन रिसाउँछन् ? प्रश्नको उत्तर दिनुको साटो किन हप्कीदप्की गर्छन् ? गहिरिएर छानबिन गर्ने हो भने यस्ता जटिल समस्याको कारण र समाधानका उपाय पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने आशा पनि यस रिपोर्टले जगाइदिएको छ । यसबाट मुलुकलाई पनि लाभै हुने थियो ।
जेहोस्, यो रिपोर्टले हाम्रा नेताहरुको बेलाबेला होलबडी चेकजाँच गराउनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान हामीलाई प्राप्त भएको छ । यो कुरा बुझेरै उनीहरु अलिकति बिरामी भए कि जँचाउन विदेशतिर गइहाल्दा रहेछन् । हामी व्यर्थै उनीहरुको उपचारको विरोध गर्दा रहेछौँ । अनि बिरामी अंगको उपचारका लागि हौसला दिनुको सट्टा उनीहरुलाई व्यर्थै गाली गर्दा रहेछौँ ।जेहोस्, ६ मिनेट आकाशमा जहाज होल्ड भइदिनाले मुलुकले यति राम्रो रिपोर्ट पायो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर एउटा खतरा के भयो भने यो प्रतिवेदनले भनेअनुसार ती एटीसीको कान जाँच गर्दा कदाचित् निरोगी प्रमाणित भयो भने त उनी कडा कारबाहीमा पो पर्ने भए त ! कान सद्दे भएका कारणले तिनको जागिर जाने त होइन कतै ?
“धेरै कपडा धेरै जाडो, थोरै कपडा थोरै जाडो, जाडो त तपार्इं धेरै लुगा लगाउनेलाई हुन्छ, हामी राउटेलाई हुँदैन,” सूर्यनारायणले सुनाए ।
जीवनमा कहिल्यै सगरमाथा आधार शिविर उक्लेका थिएनन्, राजु पिठाकोटे, ४८ । हिउँ त झन् टेलिभिजन या पत्रपत्रिकामा देखेको मात्रै । यसै वर्ष माघ ८ देखि ११ सम्म उनले फ्रान्सको भ्यालोरमा आयोजित ‘इन्टरनेसनल स्नो फेस्टिभल’ मा हिउँमूर्ति बनाए, ‘ह्वाइट ड्रप्स’ अर्थात् सेता थोपाहरु । ४ हजार मिटरको उचाइमा माइनस १२ को तापक्रममा बनाएको त्यो हिउँकला उत्कृष्ट ६ मा दर्ता मात्रै भएन, अर्को वर्षको सहभागिता पनि पक्का भयो ।
नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० लाई लक्षित गरी सगरमाथा थिममा बनाइएको थियो, त्यो मूर्ति । “साँच्चै भन्ने हो भने हिउँमूर्तिबारे मलाई केही पनि थाहा थिएन । तैपनि काम गर्न उत्सुक भएँ,” राजु सम्झन्छन्, “मसहित तीन नेपाली मूर्तिकार न्यानो लुगा खापेर गएका थियौँ तर शारीरिक तापक्रमका कारण कपडा नलगाई पनि काम गर्न सकिने रहेछ ।”
राजुका दृष्टिमा नयाँ सिर्जना नै कला हो । नयाँ सामग्री प्रयोग त्यसको अनिवार्य सर्त । उनले सुरुमा माटोका मूर्ति बनाए, पछि काठ र ढुंगाको । त्यसपछि मार्बल र स्टेनलेस स्टीलको । यो नेपालमा कसैले नगरेको काम थियो । मेसिनले मात्र बनाउने कामको परिभाषा फेरिदिए उनले । हिउँमूर्ति बनाएर अविस्मरणीय अनुभूति बोकेका उनी यसै वर्ष रुसमा परालको मूर्ति बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।
इलामको धुसेनीमा जन्मेका राजुका बा हेडमास्टर थिए भने बडी बा (बुबाका दाइ) सिकर्मी । उनले बाको चक र डस्टरभन्दा बडी बाका काष्ठसामानमा जादू देखे । उनी बाको पाकेटको पैसा चोर्थे र गीत गाउँदै गाउँ आइपुगेका गाइनेलाई त्यो पैसा थमाएर जंगलतिर लैजान्थे । अनि दिनभरि खिर्राको रुख ढालेर सारंगी बनाउँथे । त्यसरी नै उनले गाउँमै बाँसुरी र गिटार बनाए ।
उनलाई स्कुल जान र होमवर्क गर्न अल्छी लाग्थ्यो, तर काठ काट्ने, ढुंगा खोप्ने, धूलो उडाउने, माटो खेलाउने, हिलो चलाउने काम गर्दा भने दिन बितेको पत्तै हुँदैनथ्यो । घाँस काट्न जाँदा हँसियाले ढुंगा ठुँगेर मूर्ति कुद्थे । उनलाई सम्झना छ, “ममा कला सिर्जनाको नशा कस्तो थियो भने साँझ परेपछि झ्ल्याँस्स हुन्थेँ, म त बाख्रा हेर्न पो आएको हुँ ।”
चित्रकला पनि उनकै रुचिमा थियो । शैक्षिक सत्र फेरिनासाथ नयाँ किताबको गातामा नाम लेख्न उनैलाई गुहारिन्थ्यो । राम्रो अक्षर लेखेबापत पाएको धापले उनलाई भित्रभित्रै हौस्याउँथ्यो । गाउँको कालिका प्राविमा पढ्दा बडी बाको छोरा दाइ अरुण पिठाकोटे (शिक्षक) ले माटोको हात्ती बनाउन लगाए । धेरै राम्रो बनाएछन् क्यारे, लाइन कापी पुरस्कार दिए । उनले खेल्दाखेल्दै ढुंगा खोपेर बनाएका कतिपय कलाकृति लेउ लागेको अवस्थामा अझै पनि भेटिन्छन् रे ।
राजुलाई आफूजस्तै शिक्षक बनाउने सपना देखाएका थिए बाले । तर उनले मरिगए सुनेनन् । एसएलसीमा दुईचोटि फेल भए, अंग्रेजी लागेर । तेस्रो चान्समा पास भए, ०४५ मा । झापातिर साइनबोर्ड लेख्ने मान्छेले काठमाडौँमा कला क्याम्पस छ भनेर कान फुकिदिएका के थिए, बाले यतै मास्टरी गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै राजु भागिहाले । काठमाडौँमा आफ्नै मामाले चासो राखेनन्, मामा पर्नेले आफैँसँग राखे ।
ती मामा हरेक माल बेच्थे फुटपाथमा । तिनलाई सघाए, बिहान–बेलुकी । दिउँसो ललितकला क्याम्पस जान्थे । कहिलेकाहीँ, सिकर्मी र डकर्मी काम पनि गरिहाल्थे । घरबेटीले गोबर बोक्न पनि लगाउँथे । दिउँसो कलेजमा गरेको कामले सबै भुलाउँथ्यो । कलेजमा पनि उनले हत्तपत्त कसैले नरोज्ने मूर्तिकला पढे । रमाइलो के भने साथीहरु चित्रकला सिक्न उनीकहाँ नै धाउँथे ।
यसो गर्दागर्दै आर्ट स्कुल भेट्टाए उनले । एभरग्रिन इंग्लिस स्कुल साँखुमा पढाए ८–१० वर्ष । शनिबार–शनिबार भने नगरकोट पुग्थे, केन्ट पब्लिक स्कुलमा । उनको अनुकूलताका लागि स्कुल शनिबार खोल्थ्यो भने आइतबार छुट्टी दिन्थ्यो । त्यसको पारिश्रमिकले उनको कला सिर्जनामा भरथेग गर्‍यो । “एउटा पेन्टिङ गर्दा कम्तीमा ५०–६० रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो तर बिक्री नहुने,” उनी सम्झिन्छन्, “गोजीमा दाम हुँदैनथ्यो, तैपनि बनाउन मन लाग्थ्यो ।”
जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि राजुले कलाको मैदान छाडेनन् । अंग्रेजीको टन्टाले भने उनलाई कहिल्यै छाडेन । आईएफएमा फेरि फेल भए । ६–७ वर्ष लगाएर बल्लतल्ल उत्रिए । बीएफएमा सबै विषय पास गरे पनि दोस्रो वर्षको अंग्रेजीले थप शिक्षामा ब्रेक लाग्यो । पछि १० वटा मुलुक पुग्दा उनलाई कहीँ पनि अंग्रेजी चाहिएन । “मलाई अंग्रेजी न फ्रान्समा चाहियो, न त इजरायलमा । स्याउको चित्र र मुख बनाएपछि त्यो प्राप्त भइहाल्छ,” उनी हाँस्छन्, “कला आफैँमा विराट भाषा रहेछ ।”
लामो कलासंघर्षपछि राजुलाई विश्वको ढोका खुलेको थियो, सन् २००२ मा । २८ दिने कलाभ्रमणमा चार जना विद्यार्थी लिएर जापान गए । दुईचोटि गइसके जापान । उनका विद्यार्थीले सन् २००२ देखि अहिलेसम्म बर्सेनि मित्सुबिसी एसियन चिल्ड्रेन आर्ट फेस्टिभलमा पुरस्कार जितिरहेका छन् । उनी भारत, बंगलादेश, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मलेसिया, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, रुस तथा रोमानियाका अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा सामेल भइसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा भने समय नमिलेर जान पाएनन् । इन्टरनेसनल स्कलप्चर ग्रुप (आईर्ईएसएम) का सदस्य रहेका उनी आरम्भ कला समूहका उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
राजुका मूर्ति र चित्र सेमी–रियालिस्टिक अर्थात् अर्धमूर्त हुन्छन् । रियालिजम् चल्तीमै भए पनि भोलि सान्दर्भिक नहोला भनेर उनले बीचको बाटो समातेका हुन् । खुला मूर्तिकला संग्रहालयमा उनका २० वटाभन्दा बढी ‘ग्रेट वर्क’ छन् । स्वदेशका बुटवल, हेटौँडा, पोखरा, इटहरी तालतलैया, भाउन्ने बेलबारी अनि विदेशमा कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इजरायल र फ्रान्समा ।
उनको सम्बन्धको थिममा रहेको मूर्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका पृथ्वीबहादुर पाँडेले एक लाख रुपैयाँमा खरिद गरे ०६५ तिर । उक्त मूर्ति नै उनको बिक्री भएको पहिलो कलाकृति हो । दुई वर्षपहिले उनले नेपाल प्रेस काउन्सिल हातामा १२ फिट अग्लो स्टेनलेस स्टीलको मूर्ति बनाए । ‘मेरो कलम जनता र राष्ट्रका लागि’ मर्म बोकेको उक्त मूर्ति ६ लाख रुपैयाँ लागतमा एक महिनामै तयार गरे उनले ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले उनलाई नेसनल फाइन आर्टस् अवार्ड दियो सन् २००७ मा । ‘छोराको आश, आमाको लास’ शीर्षकको चित्रका लागि । महिला अधिकारमाथिको त्यो चित्र फ्रान्सको संग्रहालयमा समेत राखिएको छ । जीविकोपार्जनका लागि अहिले पनि राजु एम्बिसन कलेज र ओम ज्ञानमन्दिरमा कला पढाउँछन् । विदेशमा रहेका मूर्ति बिक्री भएका दिन उनी धनी बन्न सक्छन् । “विदेशमा बनाएका मूर्ति यहाँ ल्याउन धेरै खर्च हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कुनै दिन ती मूर्ति बिक्री भएको सरप्राइज समाचार पनि आउला ।”
ठाकुरप्रसाद मैनाली अनि माइकलान्जेलो हुन् उनका रोज्जा मूर्तिकार । उनलाई लाग्छ, अवसर पाएको भए माइकलान्जेलो बन्न सक्थे ठाकुर पनि । माइकलान्जेलोले भनेजस्तै उनका लागि हरेक ढुंगा, काठ, मार्बल, माटो, हिउँमूर्ति हुन् । त्यसलाई पहिल्याउने काम भने मूर्तिकारले नै गर्छ । राजुलाई खेद कतिखेर लाग्छ भने ललितकला एकेडेमीमा मूर्तिकारको ठाउँ चित्रकारले एकलौटी गरेका छन् किनभने मूर्तिकार राजनीति गर्दैनन् ।
द्वापरयुगका भगवान् श्रीराम १४ वर्ष वनवास बसे । कला सिर्जनामा लागि राजु भने १३ वर्ष घरै फर्केनन् । रामले जस्तो १४ वर्ष कठोर तपस्या गर्न नसकिएला भनेर उनले एक वर्ष कम गरेका रहेछन् । कलामा केही गरेपछि मात्र घर फिर्ने त्यस्तो प्रतीज्ञा गरेका थिए उनले । भनेको नमानेपछि आफूखुसी गर भनेर छाडिदिएको थियो परिवारले । त्यसैले घरबाट बोलावट हुँदा पनि उनी गएनन् ।
४७ वर्षमा आएर विवाह गर्ने फुर्सद पाए, राजुले । आफूभन्दा १७ वर्ष कान्छी काठमाडौँकी रामकुमारी देउलासँग । नेपाल टेलिकमकी कर्मचारी रामकुमारीको काखमा नौ महिने छोरा छन् । बिहेमा विलम्ब हुनुको एउटा कारण घरले खोजिदिएको केटी उनले मन पराएनन्, उनले मन पराएकी केटी मानिनन् । किनभने उनी एसएलसी फेल थिए, केटी पास । “एसएलसी फेल हुनुलाई म मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो प्रगति मान्छु,” उनी भन्छन्, “एसएलसी पास भएको भए विवह गरिदिन्थे, म त्यहीँ अलमलिन्थेँ । म कलाकार बन्ने थिइनँ । सोचेको कुरा नपुग्नु भनेको पनि कहिलेकाहीँ राम्रै हुँदो रहेछ ।”
लाग्छ, राजुलाई दुःखले कलासिर्जना गराएको छ । दुःखसँग उनी कहिल्यै डराउँदैनन् । कतिपयले उनलाई सोध्छन्, जाँडरक्सी नखाने, रामरौस नगर्ने मान्छे कसरी टाइमपास गर्छस् ? उनी बाजागाजा सबै बजाउँछन्, सेक्सोफोन, मेन्डोलिन, भ्वायलिन, ट्रम्पेट सबै । केही नभए मुखले मादल, बाँसुरी, ट्याम्पो बजाउने, म्याजिक सिक्ने गरिरहन्छन् । गीत, गजल, कविता लेख्छन्, संगीत गर्छन् । इलामको द ब्रोस ब्यान्डका राजु तामाङ, मुस्कान बलम्पाकीलगायतले गाएका छन्, उनका गीत । कलाजस्तो लाग्ने प्रायः सबै विधामा उनको अनुभव छ । तर निखार छ, मूर्तिमा ।
कला सिर्जनाका लागि विश्वविहार गर्ने सपना साँचेका यी मूर्तिकार देशको झन्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् निरन्तर । आफ्ना लागि भन्दा पनि देशकै लागि काम गर्ने असीम आकांक्षा छ उनमा । केही बिक्री नहुँदो रहेछ, किन बनाएको भन्नेलाई उनको ठाडो जवाफ हुन्छ, “बरु मलाई बूढी र बच्चाले छाड्न सक्लान्, म दालभात नदिए पनि मूर्तिकला छाड्नेवाला छैन ।” उनको कलाविश्वास साँच्चै बलियो छ ।
कुर्सीबाट अलि अघि सरेर उनले भने, “पोस्टर रे Û पोस्टर टाँस्ने माडको पैसा पनि उठाएन ।”
फूलको बोट रोप्ने त फूलकै लागि हो । तर त्यसका लागि फूलमा मात्रै पानी हालेर हुँदैन । जरामा पानी नहाली हाँगा र पातमा मात्रै हालियो भने फूल फुल्छ ? जरामा पानी नहाली कुनै फूल फुल्छ भने त्यो प्लास्टिक फूल हो । निर्देशक, लेखक, छायाकार र सम्पादकको काम भनेको फिल्मको जरा हो । अभिनय, संगीत आदिको पनि आफ्नै महफ्व छ । स्टारहरुले दर्शकलाई हलसम्म ल्याउन मद्दत पनि गर्लान् । तर फिल्म नै राम्रो भएन भने ? स्टारकै नाममा फिल्म चल्दैन, बरु त्यो स्टारले प्रशंसक गुमाउँछ ।
स्क्रिप्ट मात्र होइन, फिल्मका लागि महफ्वपूर्ण ध्वनि र पार्श्वसंगीत पनि लामो समयदेखि उपेक्षित छन् । दृश्य भनेको आवाज, रंग र प्रकाशको भाषा हो । छायाँकन र सम्पादनले त्यसलाई आकार प्रदान गर्छन् । तपाईंको मनमा जतिसुकै राम्रो विचार आए पनि त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने भाषा शुद्ध र प्रस्ट भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । कथा वा पटकथा भनेको विचार हो, त्यसलाई अभिव्यक्त दृश्यले गर्ने हो । यो अभिव्यक्तिमा कलाकारले बोल्ने संवादको मात्र भूमिका हुँदैन । फिल्मले कतिपय अवस्थामा दर्शकसँग मौन संवाद पनि गरिरहेको हुन्छ ।
कुनै जमाना थियो दार्जिलिङमा, जहाँ अम्बर गुरुङलाई मियो बनाएर युवाहरु संगीत अभ्यास गर्थे । नेपालमा राजकीय सम्मान पाएका तिनै गुरुङका चेला पिटर जे कार्थकले दार्जिलिङ र काठमाडौँको संगीत–साइनोलाई उजागर गरेका छन्– नेपाली म्युजिकमेकर्समा । संगीतमा लामो अध्ययन र अभ्यास गरेका पिटर स्थापित उपन्यासकार हुन् । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पकड राख्ने पिटरको यो पुस्तकले उनको संगीतसँगको सामीप्य मात्रै खोलेको छैन, नेपाली सुगम संगीतको संक्षिप्त रेखाचित्र पनि कोरेको छ ।
अगमसिंह गिरीको शब्द ‘नौलाख तारा उदाए’ अम्बर गुरुङको स्वर–संगीतमा घन्किन थालेपछि नै दार्जिलिङ र नेपालको सांगीतिक सम्बन्ध गाँसिएको मानिन्छ । शेक्सपियरले भनेजस्तै संगीतमा यस्तो मोहकता हुन्छ, जसले एउटा खराब वस्तुलाई पनि असल रुपमा ढाल्न सक्छ र असललाई हानिकारक रुपमा । दार्जिलिङको पहाड, गाउँ, चिया बगानलाई गुन्जायमान गरे पनि यो गीत तुरुन्तै राजनीतिको प्यान्डोरा बक्समा परिणत भएको दाबी गर्छन् पिटर । उनी भन्छन्– ‘प्रवासी समुदायको विरोध गानलाई भारत सरकारले ‘एन्टी–नेसनल’ को रुपमा व्याख्या गर्‍यो ।’ भनिन्छ, ‘ नौलाख तारा’ कै कारण गुरुङले हुँदाखाँदाको सरकारी जागिर छाड्नुपर्‍यो दार्जिलिङमा । हुन त, प्रत्यक्ष सरकारी निलम्बनमा परेका थिएनन् अम्बर । यस्तै असहजताबीच ससाना सांगीतिक कार्यक्रममा खुम्चिएर बसेका गुरुङ राजा महेन्द्रको बोलावटबाट नेपाल आए । ‘नौलाख तारा’ लाई उठानबिन्दु मानेर दार्जिलिङ र नेपालबीच एक प्रकारको सांगीतिक जुहारी नै चलेको थियो । ‘फर्क है फर्क’, ‘नजाऊ फर्की नेपाल’ र ‘अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी’ जस्ता गीतलाई नेपाली जातिको प्रवास यात्रा र पुर्ख्यौली भूमिमोहको अभिव्यक्ति मान्न सकिएला । भित्री चेला पिटरलाई अम्बरका सारा बहिखाता थाहा हुनु आठौँ आश्चर्य भएन । त्यसैले संगीतसम्बद्ध आफ्ना लेखमा बारम्बार अम्बरको नाम लिन्छन् उनी ।
आधुनिक नेपाली संगीतमा दार्जिलिङको अध्यायलाई झिकिदिँदा त्यो इतिहास नै अर्धमृत हुने ठहर मर्मज्ञहरुको छ । दार्जिलिङ बसाइमा संगत गरेका संगीतकर्मीहरु सम्झँदा पिटर नोस्ताल्जियाले भिजेका छन् । गोपाल योञ्जन, अरुणा लामा, पुष्प नेपाली, अगमसिंह गिरी, रञ्जित गजमेर, कर्म योञ्जन, तारादेवी, दिव्य खालिङ, बच्चु कैलाशजस्ता संगीतकर्मीसँगका रोचक घटनावलीका कारण पनि पुस्तक आकर्षक लाग्छ । नेपाली संगीतकी ‘नाइटिंगेल’ मानिने अरुणा लामासँग संगम क्लब आउजाउ गर्दा पिटरको बाक्लो सान्निध्य देखेर धेरैले अनेक अफवाह फैलाएछन् । तर अग्रज अरुणा लामा र आफूबीचको सम्बन्धबारे पिटरले स्पष्टीकरण दिएका छन्– ‘तिनीहरुलाई अरुणा र मबारे राम्ररी थाहा थिएन । हाम्रो सम्बन्ध पूरापूर ‘प्लेटोनिक’ थियो ।’ इन्द्रबहादुर राई, ईश्वरबल्लभका औपचारिक–अनौपचारिक चेला पिटरले विभिन्न ठाउँमा संगीत पढाए । लाग्छ, उनको नसा–नसामा सुरताल दौडिरहन्छ । लेखक वसन्त थापाको अनुरोधमा पिटरले ‘अदर इन्काउन्टर्सः दार्जिलिङ’ लेखेका छन्, जसमा शान्ति ठटाल, दिलमाया खाती, कुमार सुब्बालगायत र स्वयं आफैँमाथि पनि पोट्रेट गरेका छन् । ‘अदर इन्काउन्टर्स’ मा ध्रुव केसी, माणिकरत्न, प्रेमध्वज प्रधान, दीप श्रेष्ठ, झलकमान गन्धर्वमाथि पिटरले खर्चेका शब्दमा अति नै कन्जुस्याइँ देखिन्छ । पिटरले यी संगीतकर्मीमाथि बरु अर्को पुस्तक लेख्न सक्थे । लाग्छ, एकाध अनुच्छेदमा यी संगीतकर्मीलाई खुम्च्याउनु एक खालको अपमानै हो ।
दार्जिलिङमा अंग्रेजी संगीत सुनेर हुर्केका पिटर ६० को दशकको मध्यतिर नेपाल भित्रिँदा नेपाली संगीतको दायरा साह्रै सीमित थियो । नेपाली संगीतको सिंगो आकाश रेडियो नेपालले एक्लै थामेजस्तो थियो । संगीतको सबैभन्दा महफ्वपूर्ण पाटो वाद्यवादन हेयको सिकार भएको थियो त्यो बेला । वाद्यवादकलाई ‘अछूत’ देख्ने वर्णवादी दृष्टि व्याप्त थियो । उदार समाजमा हुर्केका पिटरलाई छुवाछूतग्रस्त समाज साँघुरो लाग्नु स्वाभाविकै थियो । अर्को समस्या थियो– यताका संगीत हस्तीलाई दार्जिलिङेले आफ्नो भाग खोसिदिन्छन् भन्ने शंका र भय । यस्तो परिवेशमा काठमाडौँमा टिक्नु लेउ लागेको ढुंगामा उभिनु बराबर मुस्किल थियो । तापनि अम्बर गुरुङलाई आदर्श मान्ने पिटरले काठमाडौँमै आफ्ना अभ्यास र ज्ञानलाई घोटिरहे । उनले सांस्कृतिक रुपमा समृद्ध त्यसबेलाको काठमाडौँलाई संगीतको कोणबाट मध्ययुगको ‘वेस्टल्यान्ड’ भनेका छन् ।
कुनै जातिको सांस्कृतिक इतिहासलाई मूल्यांकन गर्ने एउटा उत्तम कसी संगीत हो । मानव जातिको विश्वभाषा मानिने संगीतमा नेपाली इतिहास चिहाउने सानो आँखीझ्याल मात्रै यो पुस्तक बनिदियो भने पिटर जे कार्थकको सफलता माने हुन्छ । पढ्दा–पढ्दै अपुग लाग्नु यो किताबको सीमा हो किनकि अधिकांश लेख अखबारको शब्दसीमालाई ध्यानमा राखेर लेखिएका हुन् । पिटरको स्वीकारोक्ति छ– ‘यो पुस्तक मेरो व्यक्तिगत संस्मरण–संग्रह हो, न कि कुनै अर्थमा ऐतिहासिक अभिलेख ।’ तर यो पुस्तकलाई समाजशास्त्रीय अध्ययनको सन्दर्भ सामग्री बनाउन सकिन्छ ।
लेखक : पिटर जे कार्थक
प्रकाशक : हिमाल बुक्स
मूल्य : ८५० रुपैयाँ
हरेक नयाँ पुस्तक युवा आरोहीले पहाड चढ्दै गर्दा अचानक देखेको अर्को अग्लो हुस्से पहाडजस्तो लाग्छ– एकसाथ रोमाञ्चक, कष्टपूर्ण र रहस्यमय । तर प्रायः किताब पहिलो पृष्ठबाटै मर्न सुरु गर्छन्, जुन पढेर मेरो आत्मा ओइलाउँछ । खर्चेको रकम, समय, पढ्दाको कष्ट, फजुलता सबै मिलेर कुनै धोखाजस्तो अनुभव दिन्छन् । राम्रो पुस्तकचाहिँ चिट्ठा परेजस्तै हुन्छ– दुर्लभ तर वाचा, उपहार र खजानाले भरिएको । मानिसको विडम्बना के भने यति पूर्ण संसारलाई पनि अपूर्णताले खचाखच भरिदिएका छौँ । कलेवरमा विशाल पुस्तकालय पनि साँच्चिकै पुस्तक खोज्दै जाँदा दुब्लो दराजमा परिणत हुन्छ । कुनै पुस्तकका वाक्य यति सशक्त हुन्छन् कि मभित्रको पाठककीय मनमा कतै दबिएको साहस, सौन्दर्य, प्रेम, सपना सबै सजीव भएर उठ्छन् । र, आफू अचानक कुबेर भएको भान हुन्छ । मजस्तो पाठकका निम्ति राम्रो पुस्तक ‘एन्लाइटेन्ड’ मानिसको अगम्य उचाइमा बेलाबेला चियाउन पुग्ने बाटो हो ।
पछिल्लो दशक सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको पुस्तक हो– विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त । मलाई बीपी आमभन्दा सधैँ फरक मानिस लाग्थ्यो– उच्च खानदान, राजा–राष्ट्रपतिसित उठबस, मार्क्सजस्तै विचारशील, गान्धीजस्तै जीवनलाई अर्कै ढंगले उपयोग गर्ने आदि । तर उनले भोगेको गरिबी र अभाव पढेर म छक्कै परेँ । साना मानिसले भोगेको दुःख, गरिबी र सजायजस्तो जीवन त हाम्रा लागि आम भइगयो । तर सम्पन्न पृष्ठभूमिका मिथकजस्ता व्यक्तिले झेलेको कष्ट–कथाले लगातार मलाई तानिरह्यो । उनको भाषा सरल तर जादूमय ।
हाम्रो राजनीतिमा सधैँ षड्यन्त्र, धोखा, विष र अँध्याराको खेल व्याप्त छ । तर आत्मवृत्तान्तको जस्तो प्राञ्जल राजनीतिक वर्णनले हरेक पाठकलाई राजनीतिको ग्य्राजुएट बनाऊने क्षमता राख्छ । राजा, नेहर, राणा, क्रूर पञ्चायतवादी, छली कम्युनिस्ट, आफ्नै दाजुभाइ र जाली कांग्रेस कार्यकर्ताको षड्यन्त्र र भासमा पर्दा पनि सबैप्रतिको उदार र मानवतावादी दृष्टिकोण राखेकाले पुस्तकलाई राजनीतिक महावर्णन बनाएको छ । नेपालको इतिहासमा जनताप्रति यति खुलेको, कञ्चन, स्पष्ट र प्रभावकारी अभिव्यक्ति अर्को राजनेताको छैन । हालै पढेको अर्को सुन्दर पुस्तक हो– माया एन्जेलोको द हार्ट अफ वुमन । यसमा लामो र जेलिएको उनको संघर्षको गहिरो कथा छ । यी महान् अमेरिकी लेखिका मात्र नभई, अत्यन्त गरिब–अश्वेत नारी पनि थिइन् । नारी मात्रै हुन कति कष्ट होला, एउटा अविवेकी र गरिब समाजमा । त्यसमाथि अमेरिकामा अश्वेत हुनु तर उनको कथात्मक रोचकता दुःख र भासको वर्णनमा छैन ।
लिंगभेद, चरम जातिभेद, वर्गभेद र रंगभेदको चक्रब्यूहमा पनि जीवनको बाटो देख्ने मानिस साँच्चैको द्रष्टा हो । उनले तीक्ष्ण र मर्मस्पर्शी कविता रचिन् । गीत गाइन् । रंगमञ्चमा अभिनय गरिन् र मार्टिन लुथर किङले नेतृत्व गरेको अश्वेतको ‘सिभिल राइट्स मुभमेन्ट’ र ‘वुमन्स मुभमेन्ट’ मा भाग लिइन् । प्रतिभाले त उनी चारै क्षितिजबाट उदाउन सक्ने सूर्य थिइन् तर उनको अगाडि जाने एउटै बाटो थियो, संघर्ष । संवेदनशील, कोमल र मानवतावादी अश्वेत महिलाले प्रतिभाको उपयोग गरेर रचेको संघर्ष र अमेरिकाको ‘पोएट लरिएट’ सम्म बन्दाको हैरानी र दुःख स्वयंमा एकसाथ रोचक, विस्मयकारी र प्रेरक छन् । सिमोन द बुभाएरले माया एन्जेलोको जीवन जानेको भए द सेकेन्ड सेक्स अझ बहुआयामिक हुने थियो ।
मो यानको रेड सोरगम तिलस्मी लेखनको उच्च नमुना लाग्छ । मेरो पुस्ताको सारा जीवन आन्दोलन–क्रान्ति गरेरै र हेरेरै गुज्रिएको छ । हामीले ०४६ को आन्दोलन गर्‍यौँ । दसवर्षे जनयुद्ध भोग्यौँ । ०६२–६३ को आन्दोलन गर्‍यौँ । मधेस आन्दोलन जान्यौँ । जनजातिका जायज, नरम र बौद्धिक आन्दोलनको पनि साक्षी बस्यौँ । युद्ध र क्रान्ति अनेक भए तर तिनका महान् कथा र कविता पढ्न नपाएको एउटा रित्तोपन अनुभव हुन्छ ।
चीन–जापानबीचको युद्ध–कथा हो, रेड सोरगम । भयानक युद्धमाझ योद्धा युवतीको प्रेम, विवाह, यौन, सन्तानको हेरचाह र बलिदानको अभूतपूर्व कथा यति बेजोड र सुन्दर छ कि पाचौँ पटक पढ्ने तयारीमा छु । हाम्रा क्रान्ति र आन्दोलनमा पनि यस्ता सयौँ–हजारौँ कथा पक्कै थिए । तर अनकन्टार फहाड र जंगलको मौनतामा हाम्रा कथा यसै हराए । क्रान्ति गर्नेले साहित्य नलेख्ने, लेख्नेले त्रान्ति नदेख्ने समस्या हाम्रो लेखनमा रह्यो कि ! लाग्छ– क्रूर लाग्ने युद्धभित्रको सौन्दर्य महसुस गराउने अद्वितीय पुस्तक हो, रेड सोरगम ।
नेपालमा केही कविता, निबन्ध र उपन्यास उच्चस्तरीय छन् । राम्रो कुरा लेख्ने तर राम्ररी नलेख्ने लेखकीय रोग व्याप्त छ । हाम्रा अधिकांश साहित्य र पत्रकारिता लगभग उस्तै स्तरमा छन् । व्यंग्य साहित्य त हाम्रोमा एउटा भूलजस्तो मात्रै छ । जर्ज अरवेलको जस्तो समृद्ध व्यंग्य लेखनको परम्परा हामीकहाँ छैन । आक्रामक छौँ तर हाम्रो आलोचकीय क्षमता कमजोर देखिन्छ । बाढीजस्तो आएको आत्मकथात्मक लेखन झनै कमजोर छ । उद्योगपति र पूर्वप्रशासकले लेखाएका आफ्ना कहानीमा आत्मालोचना, आत्म–स्वीकृति र आफैँमाथिको व्यंग्य शून्यप्रायः छ ।